Maamulka Somaliland oo joojiyay isticmaalka lacagta shilin Somaliga ee degmada Burco • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maamulka Somaliland oo joojiyay isticmaalka lacagta shilin Somaliga ee degmada Burco
Maamulka Somaliland oo joojiyay isticmaalka lacagta shilin Somaliga ee degmada Burco
May 14, 2011 - By: mibrahim
Maamulka Somaliland ayaa maanta ka bilaabay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer qorshe lagu badalayo isticmaalka lacagihii hore ee shilin Somaliga taasi oo ka koobnayd 100 sh.so iyo 50 sh.so ah, iyadoona lagu badalayo lacagaha Somaliland ee sida caadiga ah looga isticmaalo deegaanada maamulkaasi.
Masuuliyiin ka tirsan waaxda bankiga iyo wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa ka hor inta aan la bilaabin qorshaha lacag badalista waxaa ay qabtayn kulan la iskugu yeeray ganacsatada iyo waxgaradka magaalada Burco taasi oo lagu wergalinayay inay lacagihii hore ee Sh.So. ay ku badashaan lacagta Somaliland oo ka kooban 50 100 iyo 500 oo dhamaatood ah shilinka Somaliland
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cabdi Dirir oo la hadlay shacabka magaalada Burco ee ka soo qaybgalay kulankii maanta inay gacan ka siiyaan maamulka Somaliland sidii loo badali lahaa lacagta shilin Somaliga oo si weyn looga isticmaalo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Madaxa hanti dhowrka Somaliland Maxamuud Axmed oo isagana goobta ka hadlay ayaa sheegay in looga baahanyahay shacabka magaalada Burco inay taageeraan qorshaha uu maamulka qaaday ee ku saabsan joojinta lacagihii hore ee shilin Somalilga,islamarkaana la isticmaalo lacaga Somaliland oo uu sheegay in si weyn looga isticmaalo gobolada Somaliland.
Waxaana uu intaasi uu ku daray in qorshahan ay ka hortagayso in lacago cusub oo been abuur ah in la soo galiyo deegaanada uu maamulka Somaliland uu ka arimiyo isagoona sheegay in lacagaha Somaliland ay yihiin kuwa ka tayo wanaagsan lacagihii hore islamarkaana aan la samaysan karin
Isticmaalka lacagaha shiling Soomaliga ee Xukuumadii marxuum Maxamed siyaad bare ayaa si’aad ah uga socotay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Maamulka Somaliland ayaa sanadkii 1991-dii ku dhawaaqay inuu ka go’ay dalka Somaliya,iyadoo tan iyo gooni isu taaga maamulkaasi uusan helin aqoonsi caalami ah.